Mpanamboatra sy mpamatsy varatra arrester | China Mov Light Arrester Factory
220kV polyester arrester
220kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jeneraly Ilay Zinc Oksidranonan'ny Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － voltage ho an'ny tsipika fizarana sy ny tobin-tsolika. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny ony ...
110kV polymer karazana arrester arrester
110kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Jeneraly Zinc Oksidena Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － voltage ho an'ny tsipika fizarana sy fitaovan'ny toby herinaratra. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny ony ...
110kV polyester arrester
66kV polymer karazana arrester arrester
66kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Jeneraly Zinc Oksidena Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － voltage ho an'ny tsipika fizarana sy fitaovan'ny toby herinaratra. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny ...
66kV polyester arrester
35kV polyester arrester
35kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jeneraly Ny Zinc Oxide Type Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － malefaka for ho an'ny tsipika fizarana sy fitaovan'ny toby herinaratra. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny ...
Mpanafika tselatra polymère 6kV
6kV Zinc-Oxide Surge Arrester Jeneraly Ny Zinc Oxide Type Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － malefaka for ho an'ny tsipika fizarana sy fitaovan'ny toby herinaratra. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny ...
10kV polyester arrester
10kV Zinc-Oxydre Surge Arrester General Ny Zinc Oxyide Type Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － voltage ho an'ny tsipika fizarana sy ny fitaovan'ny toby herinaratra. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny onja amin'ny alàlan'ny arrester surge dia ...
3kV polyester arrester
3kV Zinc-Oxydre Surge Arrester General Ny Zinc Oxydège Type Surge Arrester no mpiambina farany ambony noho ny － malefaka for ho an'ny tsipika fizarana sy fitaovan'ny toby herinaratra. Ampidirina amina oksida zinc sy oksida metaly hafa ho kapila fanoherana fototra, ny toetran'ny volt-ampere ary ny fahaizan'ny resistor discare dia mihatsara tampoka raha oharina amin'ny arrester karazana SiC mahazatra. Amin'ny alàlan'ny herinaratra fiasan'ny nominal dia ny ...